May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၄)
အခုအချိန်မှာတော့ မြသီလာကို လွမ်းလို့ကျန်နေခဲ့ပါပြီ ဆရာမရေ..။
ဆရာမရေ... ဆရာမ အလွမ်းကိုဖတ်ရင် ကိုယ့်အလွမ်းတွေကိုတောင် ပြန်သတိရကုန်ပြီ...
ကျွန်တော်တို့က ကျောင်းမပြီးသေးပဲ ကျောင်းတော်ကြီးက ကျောင်းကထွက်ခဲ့ရတော့ အခုအချိန်အထိ ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေတုန်းပဲ။
ကျောင်းအကြောင်းတွေဖတ်ရတာ လွမ်းစရာကောင်းလိုက်တာ။ လင်းလဲလေ ဆရာဇော်ဇော်အောင် ကိုမြင်ဘူးချင်လို့သွားကြည့်ဖူးတယ်။ အဲတုံးကတော့ စကားမပြောခဲ့ရဲ့ ဘူး။ နောက်ပိုင်း သူ့ အိမ်မှာ ဆိုင်ဖွင့်တော့ သွားစားပြီး စကားသွားသွားပြောလွန်းလို့နောက်ပိုင်းလင်းလာရင် သူပုန်းနေတဲ့အထိဘဲ။ ဟီးး ဆရာမကိုလည်း စကားပြောချင်လို့ လာခဲ့အုန်းမှထင်တယ်။
အန်တီငြိမ်းရေ ... အနှင်းကတော့ မြသီလာကို ငယ်ငယ်တုန်းကရောက်ခဲ့ဘူးပေမယ့် .. အနှင်းတို့ တက္ကသိုလ်တက်ရတဲ့အချိန်ကျ .. အဲ့ဒီနေရာမှာ မတက်ခဲ့ရတော့ဘူးလေ . ဒါမဲ့ အန်တီ့ အတန်းတွေကို လိုက်တတ်ဘူးတယ် .. အနှင်းအကိုငယ်ရဲ့ မိုင်နာတန်းတွေပေါ့ .. အန်တီသင်တာကို အရမ်းသဘောကျခဲ့တာလေ .. ဘူမီတန်းတွေမှာ အန်တီ့အတန်းချိန်ဆို .. ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာ .. အရမ်းကို သဘောကျခဲ့တာပေါ့ .. အနှင်း ၁၀တန်းအောင်တော့ .. အဲ့ဒီလို နေရာတွေမှာ မတက်ခဲ့ရတော့ဘူး .. ၀မ်းနည်းမိတယ် .အရမ်းဘဲ ..
အန်တီရေ... ဒီနေ့ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့နော်... မီးပုံးတွေကို လွမ်းလိုက်တာ။ ဒီနေ့မှ ပြန်ရောက်လို့ ခုမှ ကွန်မန့်လာရေးနိုင်တယ်။ အန်တီ့စာဖတ်ပြီး သမီးရဲ့ မြန်မာစာဆရာ ဦးဥာဏ်ထွန်းကို သတိရသွားတယ်။
မ ဂုဏ်ထူးတန်းတက်ခွင့်ရတာ ဘယ်လောက်ပျော်မလဲဆိုတာ မှန်းကြည့်ရင်ခုန်မိတယ် မရေ… ဆယ်တန်းတုန်းက မြန်မာစာဂုဏ်ထူးထွက်အောင်လုပ်မယ်လို့အားခဲပြီး မရခဲ့တော့ ငိုခဲ့ရတာ ပြန်သတိရတယ်… ကျွန်မလဲ မြန်မာစာကို အဲလောက်ရူးသွပ်သူပါ… ဒါပေမယ့် မတော်ခဲ့ဘူးလေ… မ ကို အားကျတယ်… မြသီလာမှာ ဆက်နေခွင့်ရခဲ့တာကိုက အလွန်ချိုမြတဲ့ လက်ဆောင်တခုပေါ့နော်…
အလွမ်းပြေဆိုပြီး သူများတွေကိုပါ အလွမ်းတွေ ကူးစက်လာအောင် လုပ်တာတော့ မကောင်းပါဘူး….ဆရာမကြီးရယ်။
ဒီက လွမ်းမိရင် မီးခိုးကြွက်လျှောက်လွမ်းတာ။ တက္ကသိုလ်ကစလို့အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း နဲ့ မွေးရပ်မွေးရွာကိုပါ လွမ်းသွားပြီ။ အဓိက ကတော့ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတာပေါ့လေ။ အခုတလော မြန်မာပြည်အပြီးပြန်နေဘို့ ပိုစဉ်းစားမိလာတယ်။
ရွာသားလေး.. ချိုသင်း.. Sin dan lar, pti, ကျောင်းလွမ်းချင်းတွေကတော့ အားလုံး တန်းတူလောက်ရှိမှာ သိပီးသားပါ..။ မျှဝေလွမ်းကြတာပေါ့ နော..။
လင်းရေ.. ဆရာဇော်ကတော့ တို့နဲ့ဆို သားအဖ လိုပေါ့.. သိပ်ချစ်တာ..။
နှင်းရေ..အဲဒီတုန်းကတော့ တကယ် ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့တာပါ။ ဆရာမဘ၀ကို သဘောအကျဆုံးလေ..ဒါပေမဲ့...။
မတန်ခူးရေ.. ကျမပြောသလိုပဲ တကယ်တော့ တော်တာမဟုတ်ပါ..ကျမက မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သန္ဓေကိုပါတာပါ။ တကယ်တမ်းသေချာ detail ကျက်ရမယ့်စာတွေကျတော့ သိပ်ညံ့တာ.. ဥပမာ မွန်ကျောက်စာ :)
ကိုပေါရေ.. ထပ်တူလွမ်းစေချင်တာပါ.. ကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် လွမ်းရတာကိုက အရသာ မဟုတ်လား... အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ပဲပြောပြော မြန်မာပြည်တော့ ခုအချိန်မှာ မပြန်ချင်ပါဘူး.. အရင်လို အချိန်တွေမှ မဟုတ်တာလေ..။ နောက်ပိုင်းတွေမှာ RIT ၀င်းထဲ နေတုန်းကအကြောင်းတွေလည်း လာဦးမှာ.. မျှော်........နော်။